ထိနျးသိမျးကိုငျတှယျရခကျတဲ့ ခေါငျးဆောငျလေးတဈယောကျ အာဆငျနယျကို ပွနျလာနိုငျမှာလား – Bonne Chance, Matteo! – Sports A2Z
ထိနျးသိမျးကိုငျတှယျရခကျတဲ့ ခေါငျးဆောငျလေးတဈယောကျ အာဆငျနယျကို ပွနျလာနိုငျမှာလား – Bonne Chance, Matteo!
အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ကှငျးလယျမှာ ထိနျးသိမျးကိုငျတှယျရခကျခဲပွီး မာနကွီးတဲ့ တိုကျပှဲဝငျစိတျမွငျ့မားတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျ အောကျတိုဘာ ၅ ရကျနေ့ မတိုငျခငျအထိ ရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ မမောမပနျးကစားဟနျတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပမေယျ့ သူကိုယျတိုငျရဲ့ နိုငျလိုစိတျအတှကျ လုပျခငျြရာလုပျတတျတဲ့၊ နားထောငျမှု အားနညျးတဲ့ မကျတီယိုဆိုတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျပါ။
နိုငျလိုစိတျနဲ့ အသငျးကို မောငျးနှငျတတျတဲ့ သူ့ပုံစံနဲ့ အသကျအရှယျက သူ့သကျတမျးလိုကျမှာ စံပွဖွဈနပေမေယျ့ စီနီယာကပြွီး သူ့ထကျ ကွီးတဲ့သူတှနေဲ့တော့ အံဝငျဖို့ ခကျခဲ့ပါတယျ။ ဒါကို သူ့ရဲ့ လိုအှနျနညျးပွဟောငျး မဈခေးလျ လနျဒရိုကတော့ သူက အတ်တစိတျကွီးကွီးကို ပိုငျဆိုငျထားလို့ ဆိုပွီး သုံးသပျခဲ့သလို ဒါက မှနျကနျတဲ့နရောမှာ အသုံးဝငျလိမျ့မယျလို့ ဆိုခဲ့တာပါပဲ။
တကယျတမျးတော့ သူ့ရဲ့ မောငျးနှငျခငျြစိတျ၊ နိုငျလိုစိတျ ပွငျးပွတဲ့ ပုံစံက လကျရှိ အာဆငျနယျမှာ ကစားရတဲ့ ကှငျးလယျအထိုငျအဖကျြနဲ့ ဘယျလိုမှ အံမဝငျပါဘူး။ ကစားသမားဘဝက နံပါတျ ၁၀ အဖွဈ စတငျခဲ့တဲ့ ဂနျဒူဇီရဲ့ ရှေးခယျြမှုက နံပါတျ ၆ တဈဦးတကယျတမျးဖွဈခဲ့တယျဆိုရငျ မှားယှငျးခဲ့ပွီလို့ ဆိုရမှာဖွဈပွီး နညျးပွ ခထြားတဲ့ နရောက သိပျခှာလို့ မရတဲ့ နံပါတျ ၆ ထကျ သူက ပိုလှတျလပျသလို တိုကျစဈကို ကောငျးကောငျးလိုကျမယျ့ နံပါတျ ၈ တဈဦးပဲ ဖွဈသငျ့တာပါ။
အသငျးရှုံးနခြေိနျမှာ ပိုသိသာတဲ့ စိတျဓာတျပွငျးပွတဲ့ ဘောလုံးဆှဲပွေးတဲ့ ပုံစံတှနေဲ့ ညဈဖို့လိုရငျ ဖကျလုံးတတျတဲ့ ပုံစံတှကေ သူ့ကို မျောဒနျ ဘောလုံးရဲ့ ခေါငျးဆောငျကောငျးတဈယောကျဖွဈလာနိုငျသူအဖွဈ မွငျထားကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ကို ဘယျလိုအသုံးခြ ကိုငျတှယျရမယျဆိုတဲ့ စိတျပညာကောငျးကောငျးနားလညျတဲ့ နညျးပွတဈယောကျတော့ လကျရှိမှာ လိုအပျဦးမှာပါ။
လနျဒရိုကတော့ ဆိုပါတယျ။ ဂနျဒူဇီအနနေဲ့ လကျရှိပုံစံကို ပွငျလို့မရဘူးဆိုရငျ သူ့ကို တာဝနျကွီးကွီးဖွဈတဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျ ဒါမှမဟုတျ လကျထောကျခေါငျးဆောငျဆိုတဲ့ တာဝနျယူမှုနဲ့ လကျပတျကို ပေးလိုကျဖို့ပါတဲ့။ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ တကယျတမျးမှာ သူဦးဆောငျခှငျ့ရတဲ့ ပွငျသဈ ယူ-၂၁ အသငျးကို သူမောငျးနှငျနတောကို ကွညျ့ရငျ ဒါက ဖွရှေငျးမှုကောငျးတဈခု ဖွဈနိုငျပါတယျ။
လဈခငျြစတိနျးနဲ့ပှဲက ထောငျ့ကနျဘောကို တိတိကကြ ကနျပို့နိုငျခဲ့တာ၊ နှဈဂိုး-တဈဂိုးနဲ့ ဦးဆောငျထားတဲ့ ဆှဈဇာလနျနဲ့ပှဲက တဈယောကျလြော့နခြေိနျမှာ ခံစဈကစားဖို့ထကျ တနျပွနျဖိအားပေးပွီး ဘောလုံးရသှားခြိနျမှာ အနိုငျပွတျသားစမေယျ့ဂိုးကို ဖနျတီးပေးခဲ့တာတှကေ သူဟာ ခေါငျးဆောငျခှငျ့ရခြိနျမှာ ဘာလုပျရမယျဆိုတာကို သိသူဖွဈကွောငျး သကျသပွေနပွေီး အာဆငျနယျမှာ ဖွဈပှားနတေဲ့ ပွဿနာကတော့ သူ့မှာ ခေါငျးဆောငျခှငျ့ မရှိတာပါပဲ။
လကျရှိမှာတော့ ဟာသာဘာလငျရဲ့ ကစားသမားတဈယောကျအဖွဈ အငှားနဲ့ ကစားနခေဲ့တဲ့ ဂနျဒူဇီဟာ အသငျးနဲ့ ပှဲထှကျရာမှာတော့ ခြီးကြူးမှုတခြို့ကို ပိုငျဆိုငျထားနိုငျခဲ့ပွီး ပိုမိုအသားကကြနြဲ့ ဘှနျဒကျဈလီဂါမှာ ခွစှေမျးပွနိုငျခဲ့ရငျတော့ အာဆငျနယျကို တဈကြော့ပွနျလာပွီး ပါဝငျခှငျ့ ရယူနိုငျဦးမှာပါ။
သူ့ရဲ့ ပွငျးပွတဲ့ စိတျဓာတျနဲ့ လုပျအားနှုနျးကို သူနဲ့ ဘယျလိုမှ အံမဝငျတဲ့ နံပါတျ ၆ မှာ မကစားစဘေဲ လှတျလပျတဲ့ Box to Box မှာ နံပါတျ ၈ အဖွဈ စိနျချေါခိုငျးခဲ့မယျဆိုရငျ လာမယျ့ရာသီမှာ သောမတျဈ ပါတေးနဲ့ သူ့ရဲ့ကှငျးလယျဟာ အာဆငျနယျအတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈလာနိုငျသလို ၄-၃-၃ ကစားကှကျအတှကျ လိုအပျတဲ့ ဝငျရိုး Center Pivot ကောငျးကိုပါ တညျဆောကျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အာဆငျနယျမှာ သူအံဝငျဖို့ဆိုရငျတော့ ၁။ သူ့ကို နားလညျပွီး ဘယျလိုစိနျချေါမှုတှနေဲ့ တာဝနျယူခိုငျးမှာလဲဆိုတာ၊ ၂။ အသကျ ၂၁ စှနျးစှနျး ကစားသမားတဈယောကျရဲ့ ဆရာလုပျမှုကို သညျးခံနိုငျကွမလားဆိုတာ၊ ၃။ သူကိုယျတိုငျပဲ ဆရာလုပျခှငျ့နဲ့ ထိုကျတနျကွောငျး သကျသပွေနိုငျမလား ဆိုတာ… ဒီမေးခှနျးသုံးခုကို ဖွဆေိုရမှာဖွဈပွီး အသကျငယျငယျနဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျဖွဈခဲ့သူတှရေဲ့ ခွရောကို နငျးနိုငျမလားဆိုတာကိုပဲ ကွညျ့ရတော့မှာပါ။
ဂနျဒူဇီအနနေဲ့ သူဘာလုပျနိုငျသလဲဆိုတာတှကေို ပွငျသဈယူ-၂၁ မှာ အကောငျးဆုံး ပွသနပွေီး ဒါတှကေို မှနျကနျတဲ့ နညျးလမျးနဲ့ သူကိုယျတိုငျ ကလပျအသငျးတှဆေီ သယျဆောငျနိုငျခဲ့ရငျ၊ သူ့ကို မိုကျမိုကျမဲမဲ ယုံကွညျပွီး တာဝနျပေးအပျမယျ့ နညျးပွကောငျးတဈယောကျ ရှိခဲ့ရငျ သူ့ရဲ့ အနာဂတျက ထှနျးတောကျလာမှာဖွဈပွီး ဒီနှဈခကျြစလုံး ကငျးမဲ့တဲ့ နရောမှာတော့ သူဟာ ထိနျးသိမျးဖို့ ခကျတဲ့ စဆရကတဈယောကျဖွဈနမှောမို့ အလားအလာကောငျးတှေ အလဟဿမဖွဈစခေငျြတဲ့သူတှကေတော့ ဘှနျးရှနျ့ဈ Bonne Chance – Good Luck လို့ ဆုတောငျးပေးမိနကွေမှာပါလေ။
ZAWGYI: အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ရခက်ခဲပြီး မာနကြီးတဲ့ တိုက်ပွဲဝင်စိတ်မြင့်မားတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့ မတိုင်ခင်အထိ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ မမောမပန်းကစားဟန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ နိုင်လိုစိတ်အတွက် လုပ်ချင်ရာလုပ်တတ်တဲ့၊ နားထောင်မှု အားနည်းတဲ့ မက်တီယိုဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။
နိုင်လိုစိတ်နဲ့ အသင်းကို မောင်းနှင်တတ်တဲ့ သူ့ပုံစံနဲ့ အသက်အရွယ်က သူ့သက်တမ်းလိုက်မှာ စံပြဖြစ်နေပေမယ့် စီနီယာကျပြီး သူ့ထက် ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့တော့ အံဝင်ဖို့ ခက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို သူ့ရဲ့ လိုအွန်နည်းပြဟောင်း မစ်ခေးလ် လန်ဒရိုကတော့ သူက အတ္တစိတ်ကြီးကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ ဆိုပြီး သုံးသပ်ခဲ့သလို ဒါက မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာ အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုခဲ့တာပါပဲ။
တကယ်တမ်းတော့ သူ့ရဲ့ မောင်းနှင်ချင်စိတ်၊ နိုင်လိုစိတ် ပြင်းပြတဲ့ ပုံစံက လက်ရှိ အာဆင်နယ်မှာ ကစားရတဲ့ ကွင်းလယ်အထိုင်အဖျက်နဲ့ ဘယ်လိုမှ အံမဝင်ပါဘူး။ ကစားသမားဘဝက နံပါတ် ၁၀ အဖြစ် စတင်ခဲ့တဲ့ ဂန်ဒူဇီရဲ့ ရွေးချယ်မှုက နံပါတ် ၆ တစ်ဦးတကယ်တမ်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် မှားယွင်းခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး နည်းပြ ချထားတဲ့ နေရာက သိပ်ခွာလို့ မရတဲ့ နံပါတ် ၆ ထက် သူက ပိုလွတ်လပ်သလို တိုက်စစ်ကို ကောင်းကောင်းလိုက်မယ့် နံပါတ် ၈ တစ်ဦးပဲ ဖြစ်သင့်တာပါ။
အသင်းရှုံးနေချိန်မှာ ပိုသိသာတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြတဲ့ ဘောလုံးဆွဲပြေးတဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ ညစ်ဖို့လိုရင် ဖက်လုံးတတ်တဲ့ ပုံစံတွေက သူ့ကို မော်ဒန် ဘောလုံးရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်သူအဖြစ် မြင်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ဘယ်လိုအသုံးချ ကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ပညာကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့ နည်းပြတစ်ယောက်တော့ လက်ရှိမှာ လိုအပ်ဦးမှာပါ။
လန်ဒရိုကတော့ ဆိုပါတယ်။ ဂန်ဒူဇီအနေနဲ့ လက်ရှိပုံစံကို ပြင်လို့မရဘူးဆိုရင် သူ့ကို တာဝန်ကြီးကြီးဖြစ်တဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် ဒါမှမဟုတ် လက်ထောက်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ တာဝန်ယူမှုနဲ့ လက်ပတ်ကို ပေးလိုက်ဖို့ပါတဲ့။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာ သူဦးဆောင်ခွင့်ရတဲ့ ပြင်သစ် ယူ-၂၁ အသင်းကို သူမောင်းနှင်နေတာကို ကြည့်ရင် ဒါက ဖြေရှင်းမှုကောင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လစ်ချင်စတိန်းနဲ့ပွဲက ထောင့်ကန်ဘောကို တိတိကျကျ ကန်ပို့နိုင်ခဲ့တာ၊ နှစ်ဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ့ ဦးဆောင်ထားတဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ပွဲက တစ်ယောက်လျော့နေချိန်မှာ ခံစစ်ကစားဖို့ထက် တန်ပြန်ဖိအားပေးပြီး ဘောလုံးရသွားချိန်မှာ အနိုင်ပြတ်သားစေမယ့်ဂိုးကို ဖန်တီးပေးခဲ့တာတွေက သူဟာ ခေါင်းဆောင်ခွင့်ရချိန်မှာ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သိသူဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနေပြီး အာဆင်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြဿနာကတော့ သူ့မှာ ခေါင်းဆောင်ခွင့် မရှိတာပါပဲ။
လက်ရှိမှာတော့ ဟာသာဘာလင်ရဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ် အငှားနဲ့ ကစားနေခဲ့တဲ့ ဂန်ဒူဇီဟာ အသင်းနဲ့ ပွဲထွက်ရာမှာတော့ ချီးကျူးမှုတချို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ပိုမိုအသားကျကျနဲ့ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာ ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ရင်တော့ အာဆင်နယ်ကို တစ်ကျော့ပြန်လာပြီး ပါဝင်ခွင့် ရယူနိုင်ဦးမှာပါ။
သူ့ရဲ့ ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ လုပ်အားနှုန်းကို သူနဲ့ ဘယ်လိုမှ အံမဝင်တဲ့ နံပါတ် ၆ မှာ မကစားစေဘဲ လွတ်လပ်တဲ့ Box to Box မှာ နံပါတ် ၈ အဖြစ် စိန်ခေါ်ခိုင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် လာမယ့်ရာသီမှာ သောမတ်စ် ပါတေးနဲ့ သူ့ရဲ့ကွင်းလယ်ဟာ အာဆင်နယ်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်လာနိုင်သလို ၄-၃-၃ ကစားကွက်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဝင်ရိုး Center Pivot ကောင်းကိုပါ တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်မှာ သူအံဝင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ၁။ သူ့ကို နားလည်ပြီး ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ တာဝန်ယူခိုင်းမှာလဲဆိုတာ၊ ၂။ အသက် ၂၁ စွန်းစွန်း ကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ဆရာလုပ်မှုကို သည်းခံနိုင်ကြမလားဆိုတာ၊ ၃။ သူကိုယ်တိုင်ပဲ ဆရာလုပ်ခွင့်နဲ့ ထိုက်တန်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်မလား ဆိုတာ… ဒီမေးခွန်းသုံးခုကို ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပြီး အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သူတွေရဲ့ ခြေရာကို နင်းနိုင်မလားဆိုတာကိုပဲ ကြည့်ရတော့မှာပါ။
ဂန်ဒူဇီအနေနဲ့ သူဘာလုပ်နိုင်သလဲဆိုတာတွေကို ပြင်သစ်ယူ-၂၁ မှာ အကောင်းဆုံး ပြသနေပြီး ဒါတွေကို မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ သူကိုယ်တိုင် ကလပ်အသင်းတွေဆီ သယ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်၊ သူ့ကို မိုက်မိုက်မဲမဲ ယုံကြည်ပြီး တာဝန်ပေးအပ်မယ့် နည်းပြကောင်းတစ်ယောက် ရှိခဲ့ရင် သူ့ရဲ့ အနာဂတ်က ထွန်းတောက်လာမှာဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်ချက်စလုံး ကင်းမဲ့တဲ့ နေရာမှာတော့ သူဟာ ထိန်းသိမ်းဖို့ ခက်တဲ့ စဆရကတစ်ယောက်ဖြစ်နေမှာမို့ အလားအလာကောင်းတွေ အလဟဿမဖြစ်စေချင်တဲ့သူတွေကတော့ ဘွန်းရွှန့်စ် Bonne Chance – Good Luck လို့ ဆုတောင်းပေးမိနေကြမှာပါလေ။
ဇနျနဝါရီမှာ မကျဆီကို သနျး ၅၀ နဲ့ အရချေါယူသှားဖို့ မနျစီးတီး ကွံစညျနေ
ဒကျကလနျ ရိုကျဈကို ချေါနိုငျဖို့အတှကျ ဇနျနဝါရီမှာ မာရီနာ ရှငျးထုတျမယျ့ ကစားသမားငါးဦး